I-Ultrasonic Cold-Water Extraction yeMogrosides evela eMon Fruit - iHielscher Ultrasound Technology
Isithelo seMonk (S. grosvenorii) ukukhipha futhi ikakhulukazi i-mogroside V yayo eyakhiwe isetshenziswa njengomunandi we-non-caloric wemvelo.
Isizinda se-ultrasonic yindlela elula, esheshayo, ephindwe kabusha, futhi enokwethenjelwa yokusetshenziswa ngendlela ephumelelayo ukukhiqiza izithelo ezingokwemvelo ezingezona caloric ezivela esitsheni se-monk.
Isizinda se-Ultrasonic singenziwa ngamanzi noma i-solvents efana ne-ethanol noma i-methanol. Isizinda samanzi kuyindlela eluhlaza evumela ukuthi kuvezwe amakhophi aphezulu e-mogroside.
I-monk izithelo ziqukethe i-cucurbitane-type triterpenoids eyaziwa njenge-mogrosides. Ikakhulukazi i-mogroside V ithola ukunakwa njengoba inikeza ubumnandi izikhathi ezingu-100-250 ezinomsoco kunokweshukela ovamile, kuyilapho kunezakhi zamakholori. Ngako-ke i-monk izithelo ezikhishwe yizinsuku zemvelo ezithandwayo, i-zero-calorie sweetener. I-mogrosides yayo enamakha amnandi ibonisa izinzuzo ezihlukahlukene zezempilo ezifana nezakhiwo zokuvimbela i-antioxidative ne-anti-inflammatory, ezenza ukuthi zisetshenziswe ngezindlela eziningi ngezindlela eziningi.
Ukukhishwa kwe-ultrasonic ye-Mogrosides kusuka ku-Monk Fruit
I-ultrasonic extraction technique iyaziwa kakhulu ukuqinisa izinqubo zesikhamo ngokuvula izakhiwo ze cell futhi nokwandisa ukudluliswa kwamandla. Izitshalo ze-Mogroside zingatholakala ngokuphumelelayo kakhulu emthonjeni wezithelo eziluhlaza ngokusebenzisa amanzi noma izixazululo ezihlukahlukene ze-aqueous njenge-solvent. I-Sonication iyindlela yokwelapha emnene, engezona ezishisayo, engahlanganiswa namanzi okubandayo-ukukhiqiza izitshalo ze-monk izithelo eziphezulu kakhulu. Ngezinga lokushisa lokunciphisa kanye nokugwema izixazululo ezinzima ukuchithwa kwe-thermal kanye namakhemikhali we-mogrosides kuvinjelwe.
Noma kunjalo, mayelana nokusetshenziswa kwe-solvents, i-sonication ingasetshenziswa ngezindaba ezihlukahlukene zokususa. Funda kabanzi mayelana nokusetshenziswa kwe-solvents for extraction ultrasonic kusuka ku-botanicals!
Ngokwesibonelo, esimweni sokufunda ngoLuo et al. U-2016 u-ultrasound-usizwa okuqinile-okuketshezi okwakhiwa kwe-mogrosides ku-methanol / amanzi (80:20 v / v) atholakala ukuthi anikeze imiphumela enhle ngenkathi elula, ebiza kahle futhi ephindaphinda kakhulu.
non-thermal, ukubandwa okubandayo
Hielscher Ultrasonics’ okunikezwayo encane, ubukhulu obuphakathi futhi Izimboni amaprosesa e-ultrasonic, angasetshenziswa 24/7. Kuncike ekutheni ivolumu yakho nenqubo yokusebenza, sikwazi ukukunikeza uhlelo lwe-ultrasonic yezizinda ezihambisana nezidingo zakho. Ungakhetha phakathi kwe-batch ne-extraction. Ngokukhamba kwesikhathi ukukhishwa kwamandla okusebenza okukhudlwana kungenziwa kalula kusukela izinqubo ze-ultrasonic zingahle zenziwe ngokulinganayo.
Izinhlelo ze-pilot kanye nezimboni ze-Hielscher zingakwazi ukuletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu – okuvumela ukuqhuba amam amplitudes angafika ku-200μm athembeke futhi aqhubeke nokusebenza ku-24/7. Nge-amplitudes ephakeme nakakhulu, i-sonotrode e-ultrasonic eyenziwe ngezifiso iyatholakala. Ukuqina kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuvumela imisebenzi enesimweni esindayo nasezindaweni ezinzima.
Njengomkhiqizi wesikhathi eside eside we-ultrasonic extractors, u-Hielscher ungumlingani wakho onokwethenjelwa wesakhiwo esiyinkimbinkimbi. Thina thintana futhi usize amakhasimende ethu ngolwazi lwethu futhi sibaqondise kusuka ekuhloleni okusemandleni ukufakwa kwezimboni.
Xhumana nathi manje! Siyajabula ukuxoxa ngezidingo zakho zokukhishwa nawe!
I-Jing Liu, i-Liu, i-Yonghai Rong, i-Long Rong (2012): Ukukhishwa kwe-Mogroside ne-Limonin ngeZindlela zokuNciphisa ezahlukene kanye ne-Modeling yayo. I-International Journal of Food Engineering, uMqulu 8, Issue 2. 1556-3758.
Luo Z., Shi H., Zhang K., Qin X., Guo Y., Ma X. (2016): I-chromatography ye-liquid ne-tandem mass spectrometry indlela yokuzimisela ngesikhathi esisodwa se-mogrosides amnandi ezithelo zika-Siraitia grosvenorii kanye ukudayiswa kwamakhasimende. J Sep Sci. Novemba 2016; 39 (21): 4124-4135.
Izithelo zikaSiraitia grosvenorii (Swingle), umvini we-herbaceous owaziwa nangokuthi uLuo Han Guo, uBuddha fuit, noma izithelo zesikhathi eside, zingatholakala kabanzi nge-Asia, lapho zibizwa khona njengezitshalo zokwelapha ukuphatha ukukhwehlela, umkhuhlane nokuqothuka. Emazweni aseNtshonalanga, izitshalo ze-monk izithelo ziye zathola ukuthandwa kakhulu njenge-sweetener engeyona caloric yokudla neziphuzo.
Izingxenye eziyinhloko ze-Luo Han Guo izitshalo ezingenasici ziyi-cucurbitane glycosides (eyaziwa ngokuthi i-mogrosides, i-mogrosides II, III, IV, V, no-VI) kanye nama-flavonoids nama-melanoidin.
I-Mogrosides yi-cucurbitane-type triterpenoid glycosides, eyabangela ukunambitheka okukhulu okumnandi. Izithelo zikaMonk’ ama-glycosides akhiwa ngamanye ama-mogrosides ahlukahlukene. I-Mogroside V yiyona ingxenye enkulu yobumnandi bezithelo futhi ikhona ngamanani aphezulu (0.50%) ku-S. grosvenorii. I-mogroside V ehlanzekile i-Extract is approx. Ama-250-450 izikhathi ezinomnandi kunalokho okuxubile okufanayo kwe-sucrose (ushukela etafuleni)
Ukukhishwa kwesithelo seMonk, okuye kwahlukaniswa ngamanzi njengesixazululo, ku-approx. Izikhathi ezingu-150 ezithandekayo kune-sucrose futhi kubikwa ukuthi zihlale zizinzile ngisho noma ziphekwe ngamanzi amahora angu-5.
Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi i-mogroside V isebenza njenge-antioxidant engakwazi ukubulala izinhlobo ze-oksijeni ezisebenzayo (ROS) futhi ivimbela ukulimala kwe-DNA. Lezi zici eziningi ze-mogrosides ze-monk izitshela ukuthi kukhishwe umkhiqizo owusizo kakhulu. Isizinda esisizwa nge-ultrasonically sisebenzise ngempumelelo ukuze sikhiphe futhi sihlukanise i-mogroside V esuka ku-S. grosvenorii (isithelo se-monk) sokusetshenziswa okunomsoco ekudleni nasekuphuzeni kanye nemikhiqizo yezokwelapha.